Egwuregwu egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ, ndị na - enye ihe - China egbugbere ọnụ etemeete Nsukka
Clear Lip Gloss Moisturizing Vegan egbugbere ọnụ Care makeup etemeete egbugbere ọnụ plumper creamy egbugbere ọnụ mmanụ maka mkpa egbugbere ọnụ
Gịnị Mere I Ji Chọọ egbugbere ọnụ anyị plumper Gloss moisturizing egbugbere ọnụ Oil? Gịnị kpatara ị ga - eji họrọ mmanụ doro anya anyị na - egbu maramara egbugbere ọnụ? Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara ya: 1. HYDRATED AND FULL - Ebumnobi egbugbere ọnụ na-eme ka egbugbere ọnụ gị dị mmiri mmiri ma n'otu oge na-agbanye ha, mmanụ egbugbere ọnụ anyị na-abawanye ụda egbugbere ọnụ site na ịmịpụta mmiri site na gburugburu ebe obibi ma mee ka mmiri ghara ịmịcha akpụkpọ ahụ, na-enye gị nke ahụ sexy hydrated. lee anya na-abụghị nke nnyapade. 2. AKWURKWỌ AKWISTKWỌ: A na-emepụta ude mmanụ a na moisturized ma gbaa ume ...
Omenala Akara Matte lipgloss Na-adịgide adịgide 40 agba egbugbere ọnụ Tint High ink Waterproof Matte Liquid lipstick
Gịnị Ka Ọ Bụ? Nke a lipgloss-enye egbugbere ọnụ gị a jupụtara, sensuous Full nke ọnwụnwa. chepụtara na a dara oké ọnụ, ezi matte imecha, nro dị ka silk. Elu àgwà, Portable size, mfe na-ebu. Adabara ọkachamara ojiji ma ọ bụ n'ụlọ were. N'agbanyeghị ụcha obi gị chọrọ, ị ga-adị oke mma mgbe niile. Texturedị ahụ dị nro ma dịkwa mma, na ụdị ihe eji eme ihe dị mfe iji mepụta egbugbere ọnụ mara mma. Agba zuru oke, agba ọgaranya, nsụgharị agba dị elu. Ọ nwere ezigbo mmiri na ...
Onwe nke Label Metalic Shimmer Lipgloss Vegan Cosmetics Waterproof 17 Agba bling Mee Up Diamond Matte ewute Liquid lipstick
Gịnị Ka Ọ Bụ? A na-egbu maramara lipstick na agba, nye gị a enwu & enwu egbugbere ọnụ, multiple agba izute mkpa nke gị kwa ụbọchị iji. Họrọ ụdị ejiji ma ọ bụ agwakọta nke agba iji mee ka etemeete gị bụrụ nke zuru oke. Onyinye Zuru Oke maka Girlsmụ agbọghọ –Na ngwugwu pụrụ iche, ọ bụ ezigbo onyinye maka ụmụ agbọghọ ma ọ bụ ụmụ nwanyị na ụbọchị ọmụmụ, mmemme ịchọ mma, Dance Party na Wedding Makeup.let mma ghọọ kwa ụbọchị, ma kuziere ụmụ nwanyị ka esi ghọrọ ụmụ agbọghọ mara mma na agụụ mmekọahụ. Atụmatụ: 1.Colorful Liquid Lipstick – A onwunwu ...